"Bath eziyinkimbinkimbi" Novoperedelkino: incazelo, amanani, ukubuyekezwa
"Bath eziyinkimbinkimbi" Novoperedelkino (Family Club) - elidumile sasivumela lezakhamuzi kule ndawo. Kukhona nje kuphela sauna futhi i-swimming pool, kodwa futhi ejimini, ubuhle salon, massage. What do bendawo mayelana nekhwalithi ezihlinzekwa "Bath eziyinkimbinkimbi" Novoperedelkino?
"Bath eziyinkimbinkimbi" Novoperedelkino kuhlanganisa sauna, ikamelo umusi, indawo yokubhukuda, ejimini, ubuhle salon. Kukhona cafe elincane. khona okuphezulu kungenxa ngamanani ezifanele. Ngaphezu kwalokho, uhlelo eziyinkimbinkimbi izaphulelo.
Izesekeli ezingase okudingekayo uma uvakashela echibini noma ejimini kufanele zifakwe uhla ezitolo elise kwakhiwe isikhungo sezempilo.
Naphezu kwezimo kuqhathaniswa evumayo, kungatholakala kwi Izibuyekezo eziyinkimbinkimbi nemibi. Yini akuyona izivakashi anelisekile Family Club? Ukuze uphendule lo mbuzo, kumelwe sicabangele izimo futhi izindleko izinkonzo eziyisisekelo.
Lokhu ngokuhlukana, njengoba kwezinye izikhungo efanayo, ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili: iduna nensikazi. ukuvakashelwa Single kubiza ruble 820 ngezinsuku zeviki. Ngesikhathi session ngempelasonto eyodwa, kuthathe amahora amathathu, izobiza ruble 920. Izingane ezingaphansi kweminyaka eyisikhombisa zokuvakashela okugeza mahhala. Intsha enikeziwe amaphesenti amahlanu isaphulelo.
ukuthenga ukuthenga Yiqiniso, ikuvumela ukuba ugcine ibhajethi kancane umkhaya. Ngokwesibonelo, ukuvakasha eziyisishiyagalombili kufanele ukhokhe Imininingwane ruble 4 900. Intengo uphansi. Mhlawumbe yilesi sizathu esenza labo uhlela ukuvakashela "Bath eziyinkimbinkimbi" Novoperedelkino, sauna, agodliwe kusengaphambili, izinsuku ezimbili noma ezintathu ngaphambi kokuphela kwesonto. Futhi lokhu naphezu kweqiniso lokuthi ukukhubazeka phakathi abasebenzi, ngokuvumelana lobuya izivakashi, sisekhona sona.
Isimo izisebenzi umusi isikhungo balandela neze. Izivakashi bephoqeleka futhi ugeze, bese liyazika eyakhe. Uyakufakazela lokhu Izibuyekezo ikhasimende eziyinkimbinkimbi, uncamela umndeni iholide ethule. Kodwa abaningi okugeza - endaweni hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa ukwelashwa, kodwa futhi amaqembu. Okunjalo izivakashi yokuntuleka inzalo okugeza akuyona uMore kakhulu.
Ukubhukuda - indlela ephumelela kakhulu ukuqeda ubuhlungu emuva, okuyinto namuhla uhlushwa inombolo nenqwaba yabantu. "Bath eziyinkimbinkimbi" Novoperedelkino, intengo namasevisi impela ezingabizi, futhi uvakashele izakhamuzi eziseduze kwalapha.
Izindleko wokuvakashela ongashadile ruble 450. Kodwa ichibi elincane, futhi lena kusimo eyinhloko Family Club. Ngokusho ngempendulo izivakashi, egumbini eydijithali Igumbi eshaweni imnandi kakhulu. Izakhamuzi eziningi uncamela Novoperedelkino pool "Rainbow", lapho kukhona imibandela ngisho abaqhuba ezemidlalo zochwepheshe, futhi izindleko ukuvakashelwa olulodwa ngezansi.
amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela
Izinhlelo eziningi wengxoxo Family Club kuhloswe wobulili bubuhle. Njalo amakilasi amanzi ngosuku aerobics (schedule elingezansi libonisa). "Bath eziyinkimbinkimbi" (Borovskoe umgwaqo) kungenziwa wavakashela nganoma isiphi isikhathi ngokuthenga "Ikhadi elilodwa". Ethebuleni ngezansi, amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela amakilasi isheduli ebekiwe, okuyinto eyenziwa abaqeqeshi professional.
isikhathi uhlobo umsebenzi
10:00 Ukuqeqeshwa emanzini
11:00 Amakilasi usebenzisa imishini ekhethekile
19:00 Amakilasi usebenzisa imishini ekhethekile
19:45 Amandla amakilasi oorudovaniya ekhethekile isolzovaniem
Esinye isifundo - imizuzu 45. yenziwa ngesikhathi sinye siyafanana, kungakhathaliseki usuku lwesonto.
Labo abafisa ukusebenzisa uhla eligcwele izinkonzo ezenziwa isikhungo Wellness, ukukhokhela bahanjelwe (pool, ejimini, ama-sauna) Yiqiniso, ngeke inzuzo. Kungcono ukuthenga ikhadi club. Kunezindlela ezihlukahlukene ongakhetha. Noma ingacosha ikhadi oluyokwenza ukuvakashela eziyinkimbinkimbi ku-schedule ngabanye. Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe "ikhadi oyedwa" ruble 8000. Ugunyata ukuba ujabulele zonke izinhlelo ukufaneleka, khona amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela amakilasi kanye sauna.
On kukhethwa amakhadi club, esinikela "Bath eziyinkimbinkimbi" Novoperedelkino wokubuyekezwa okuvumelekile. Phela, labo abakhetha ukusebenzisa kwechibi ejimini kaningana ngesonto, ukuthengwa lokhu okubhalisele ikuvumela ukuba ugcine. Kukhona ezinye izinketho of ubulungu amakhadi, kodwa ukumazi ngokuqondile nomqondisi. Isakhiwo itholakala kuleli kheli: ul. Sholokhov, Isakhiwo 5, eduze komgwaqo omkhulu Borowski.
Kuyini ndaba omnyama? Imfundiso yokuziphendukela esimnyama
Izivumelwano International phezu ukuvikeleka kwebhoduluko: izibonelo
Amanzi angcolile: Izindlela zokuhlanjululwa
Izici nezimfuneko: Umkhawulo diving ka ngwenya ukujula
Kushisa bhé kule ndawo: umthamo ebulalayo ngoba abantu
Yini futhi sendlela yokuphatha abanye iqhubezela on izithende zabo
Ngokumitha kwemihlambi ngaphakamisa izinja. Okufanele ukwazi abalimi
Vaz-2112 ngeke uqale: Izimbangela Nezingozi Solutions
Kungani izingane musa ukulala ebusuku - kubangela nezindlela sizozinqoba.
Wamehlo - ngubani?
Alexander Spivak - Biography of footballer
I-multivarka enomsebenzi wokubhema. Multivarka ngomsebenzi wokubhema u-Redmond
Ibhulukwe lwabesifazane esisemthethweni, yayizovela (isithombe)
Ukufunda ukugcwalisa umlando ekwelapheni lesi sifo